रबि लामिछाने माथि अर्जुन क्षेत्रीले गरेको भविष्यवानी सतप्रतीसत मील्यो ! रबि लामिछाने जेल.... ?? - PUBLIC AAWAJ-पब्लिक आवाज
प्रकाशित : बुधबार, साउन २९, २०७६२२:२८ पब्लिक आवाज /संवाददाता
काठमाडौँ। फेस रिडर भनेर चिनिएको ज्योतीष हुन् अर्जुन क्षेत्री । उनी केहि समय अगाडि नेपालमा ठूलो भूकम्प आउँछ भन्दै मानिसहरुमा क्रास फैलाएको भन्दै प्रहरीले जेल समेत हालेको थियो । त्यस पश्चात मिडियामा देखिनै छाडेका थिए अर्जुन । उनी जेल जानु भन्दा अगाडि निकै चर्चाको पात्र बनेका थिए । तर पछिल्लो समय जति उनलाई सपोर्ट गर्ने छन् त्यो भन्दा धेरै उनलाई गाली गर्ने भेटिन्छन् । यो कुरा उनलाई सामाजिक सञ्जालमा गरिएका गालीबाट प्रष्ट बुझ्न सकिन्छ ।